ओलीका सल्लाहकारले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई छौंडा भनेपछि हंगामा ! - Nepal's Online News
ओलीका सल्लाहकारले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई छौंडा भनेपछि हंगामा !
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरेको ट्वीट अहिले चर्चामा छन् । शनिवार विहिनै सरकार विरोधीलाई छौंडा भने पछि उनको आलोचना हुन थालेको छ । भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण रोकेको भन्दै अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
शनिबार सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री भारतसामु झुकेको भन्दै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए । पछिल्लो समय गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका विषयमा पनि सरकारको तिव्र आलोचना भइरहेको छ ।
यही बेला रिमालले सरकार विरोधीलाई तिर हानेका छन् । उनले छौंडाहरुले दुख दिएको भन्दै आक्रोस समेत पोखेका छन् । उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन्, दुःख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् की, कसैले छोडेका ?’ उक्त ट्वीटका कारण नेकपाका कार्यकर्ताले नै रिमालको आलोचना गरिरहेका छन् ।